Poco F2 Pro 5G, khibrad kadib 20 maalmood oo la isticmaalay | Androidsis
Poco F2 Pro 5G, khibrad kadib 20 maalmood oo la isticmaalo
Wixii loo ballanqaaday waa deyn, Iyo 'Androidsis' waxaan marwalba jecel nahay inaan si qoto dheer u tijaabino aaladaha si aan kuugu keenno khibradeena ugu daacadsan. Markan isagaan la jirnaa Little F2 Pro 5G, terminaal qiimo qaali ah ku leh lacag laga helo shirkadan hoos timaadda Xiaomi taas oo inaga dhigtay inaan dhammaanteen hadalno.
Nagala soo bax falanqayntaan qotada dheer ee Poco F2 Pro, terminal-ka cusub oo qiimo aan caadi aheyn ku fadhiya oo lacag ah.
Sida had iyo jeer, waa inaan ku xusuusiyaa taas xagga sare waxaad ku leedahay dib-u-eegista qaab muuqaal ah, Qaab xiiso leh oo si joogto ah kor ugu kacaya tayo ahaan iyo tiro ahaanba halkan ah Androidsis, dhexdeeda waxaad ka heli doontaa caddaynta kamaradda fiidiyaha iyo sidoo kale shaashadda iyo codka, tusaale ahaan. Marka waxaan kugula talinayaa inaadan fiirin oo kaliya, laakiin sidoo kale inaad fursad uhesho inaad iska qorto kanaalkayaga YouTube-ka oo aad ka caawiso bulshada Androidsis inay sii wadaan koritaankooda. Ma ka heshay? Waxaad ka iibsan kartaa LINKAN.
1 Boodbood weyn oo xagga nashqadeynta ah
2 Khibrad heer awood ah
4 Wixii aan ugu jeclaa iyo waxa ugu yar ee aan ka helay
Boodbood weyn oo xagga nashqadeynta ah
Heerka naqshadeynta, Poco F2 Pro 5G wuxuu qaatay boodbooyin muhiim ah marka loo eego qaabkii hore, shirkadda Poco waxay si rasmi ah ugaga tagtay balaastigga iyo fudeyd si toos ah ugu sharaddo muraayadda (in kasta oo aysan lahayn lacag-bixin aan fiilo lahayn) iyo bir. Inkasta oo ay shaki la’aan tahay kamaraddeeda dambe ee afarta dareere ah ee indhaha badankeeda dejin doonta. Si kastaba ha noqotee, Si ka duwan wixii hore u dhacay, Poco F2 Pro ma aha oo kaliya bahal gudaha ku jira, laakiin sidoo kale waa qurux banaanka, Taasina waxay ahayd wax inta ugu badan ee astaantu ay durbaba bilaabeen inay dalbadaan.
Cabirrada: X x 163.3 75.4 8.9 mm
Miisaanka: Gram 219
BUY Yar F2 Pro 5G> LINK
Sida iska cad waxaan kala kulanay dhibaato xagga boodboodayaasha qalabka, culeyska. "Iftiiminta" ay moodyadi hore soo bandhigi karaan ayaa aad uga dambeysa, iyadoo la tixgelinayo cabirka muuqda ee shaashadeeda, waxaan si cad dib ugu laabannay dib-u-qaadista. Xitaa waad sameyn kartaa wax culus markaan ku wajaheyno maalmo dheer oo ciyaaro fiidiyoow ah sariirta ama kursiga fadhiga, taas oo ah wax ilaa hada aan laga fekeri karin xoogaa. Noqo sida ay noqon karto, Waxaan ka doorbidayaa boodboodkan muhiimka ah ee tayada ay qaateen, shaqsiyanna waxaan u arkaa terminaalku mid soo jiidasho leh.
Khibrad heer awood ah
Qeybtaan si dhib ah ayaan ku seegi karnaa wax. Waxaan helnay nafteena kahor qalab isdifaacaya isaga in kabadan inta kufilan ciyaaraha fiidiyowga iyo codsiyada tafatirka sawirada, tusaale ahaan. Midkoodna barnaamijyada kajira Google Play Store ee aan inta badan isticmaalno nagama hor istaagin qaab xusid mudan, waana liiska aan hoos kaaga tagi doono, wax walbana waxay leeyihiin caqli gal.
MUUQAAL 6.67-inch AMOLED oo leh xal buuxa HD + - heerka saamiga 180 Hz - 1.200 nits oo dhalaal ah - HDR10 + - Gorilla Glass 5
PRORESOR 865-core Snapdragon 8
KAAMARKA DIBADDA 686 MP Sony IMX64 Sensor Main - 5 MP Telemacro Sensor - Sensor Qoto Dheer 2 MP
KAAMI HOR 20 MP oo leh farsamo pop-up ah
BATARY 4.700 Mah oo leh 33W lacag deg deg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 oo leh Poco Launcher 2.0 interface
Isku xirnaanta 5G - WiFi 6 - Super Bluetooth 5.0 - GPS Dual - USB-C - NFC - Mini jack - IR Blaster
MUUQAALO KALE Shaashadda shaashadda akhristaha - Qaboojinta dareeraha ah
Markan waxaan waxaan ku tijaabineynaa qeybta 6GB oo ah LPDDR5 RAM iyo 128GB oo keyd ah siinta natiijooyin aad u wanaagsan maalin kasta. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa waayo-aragnimadeena qaybtaan waxay ka badneyd qancin.
Waa inaan si gaar ah u xusno nidaamka qaboojinta dareeraha ee arrintan la xiriira, waan helay taas Ciyaaraha sida PUBG, Asphalt 9 iyo CoD Mobile waxaan leenahay heerkul yar oo ka hooseeya aaladaha tartamaya, xitaa marka ay timaado dhamaadka sare, tanina aad ayey iiga yaabisay.
Waxaan ku bilaabaynaa dareemayaasha ugu waaweyn, halkaas oo aan ka helnay wax badan oo isdhaafsi ah. Waxay si gaar ah u yihiin kuwa soo socda: 686MP IMX64 sensor oo ah tan ugu weyn, 13MP Wide Angle sensor ilaa 123 digrii, 5MP telephoto + macro iyo ugu dambeyn a 2MP sensor loogu talagalay qaabka sawirka.
Waxaan leenahay hagaajin wanaagsan oo midabka iyo buuxintiisa ah. Dhinaceeda, dalabku waa qayb muhiim ah. Waxaan leenahay dhibaatooyin badan marka nalalka dabiiciga ah uu dhaco, taas oo ah mid iska cad, gaar ahaan tan 5MP shiddada taleefanka iyo dareeraha qoto dheer ee 2MP ayaa ka badan caawinta wixii kale. Sidaa darteed, xaaladaha nalka wanaagsan waxaan ku helay natiijooyin wanaagsan, ma ahan marka kamaradaha ay la kulmaan dhibaatooyin, taas oo ah iftiin dambe ama iftiin xumo. Marka la soo koobo, waxaan leenahay kamarad si caddaalad ah u kala duwan, taasna waa in la yiraahdaa, taasna waxay ku sii jirtaa qadka macquul ah ee ku jira boosteejada qiimaha la midka ah, iyada oo aan la muujin.
Qeybteeda, fiidiyowgu wuxuu si fiican ugu xasilloon yahay xuduudaha macquulka ah ee qiimaha badeecada, iyo kamarada isdaba-joogga ah ee loo yaqaan 'selfie camera' waxay umuuqataa guul dhab ah, iyadoo ay jirto xaqiiqda ah haddii aan si joogto ah u isticmaalno, digniin ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda xannibaysa isticmaalkeeda.
Wixii aan ugu jeclaa iyo waxa ugu yar ee aan ka helay
Waxaan hadda tagnaa soo koobidtii waaya-aragnimadayda. Waxa aan ugu jeclaa inaan kubiloodo waxay ahayd boodboodka tayada leh ee Poco uu kuqaatay soo saarista terminalka, isagoo siinaya dareen "qiimo" aad u guuleysta. Dhinaceeda, waxaan si gaar ah u xuseynaa gudigeeda wanaagsan, in kasta oo ay run tahay in aanaan haysan heerar cusbooneysiin sare sida haddii tartanku socdo, gudigu wuu ku fiican yahay dhan walba. Muuqaal kale oo weyn ayaa sidoo kale ahaa in ka badan 9 saacadood oo shaashad ah oo aan awoodnay inaan helno waqtiyo gaar ah iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadka batterigeeda.
Ugu dambeyntii waxaan sidoo kale leenahay dhinacyo tabanTusaale ahaan waa inaan ku bixin lahaa dareeraha 2MP si aan u kordhiyo tayada Ballaarta ballaaran ama Telephoto, shaki la'aan. Sidoo kale kamaan dhammeynin jeclaanta waxqabadka shaashadda shaashadda shaashadda, taas oo weli waddo dheer u socota si ay ugu shaqeyso sidii aan filaynay. Waxaad ka iibsan kartaa 390 euro meelo kala duwan oo iib ah sida Amazon (LINK).
Boodhka muhiimka ah ee tayada marka la eego qalabka iyo naqshadeynta
Awood wanaagsan iyo qaboojin qiimaheeda
Qalabka wanaagsan ee kamaradaha isku dhafan
Dareeraha sawirka shaashadda ayaa gaabis ah
Luminta asalkaaga qiimaha jaban
Tayo-xumada kaamirooyinka oo leh iftiin la'aan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Poco F2 Pro 5G, khibrad kadib 20 maalmood oo la isticmaalo
Waxaan tijaabinay Ilbaxnimada VI: waxay ku galeysaa moobilkaaga habka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan ee kor loogu qaadi karo astaamaha